Tag: email nkesa | Martech Zone
Tag: email nkesa
Mgbe mbụ m malitere ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ, ana m arịọ ka ha nye m ohere ịnweta akaụntụ Google ha na ikikere zuru oke. Nke a na - enyere m aka nyocha ma bulie ngwaọrụ Google ha - gụnyere Search Console, Tag Manager, Analytics, na Youtube. Ọtụtụ mgbe, ụlọ ọrụ nwere mgbagwoju anya banyere onye nwere akaụntụ gmail ahụ. Nchọgharị ahụ amalite! Nke mbu, ikwesighi idebanye aha gmail maka